Redrock 1203 - Serenity Retreat ⚡24/7⚡ - I-Airbnb
Ukulala ukuya kutsho kwiindwendwe ezi-4 kwindawo etofo-tofo, eli khaya limnandi leholide lenza ukhetho olufanelekileyo lokuhlala kwakho eLebhanon!
Eli gumbi lihle lenziwe ngokugqwesileyo kunye nentuthuzelo yakho engqondweni.
Igumbi lokuhlala elifudumeleyo elimemayo libonisa umgangatho wamaplanga kuyo yonke indawo kunye nefanitshala emnandi yeli xesha kunye nendawo yomlilo yombane.
Igumbi lokuhlala elihonjisiweyo likuvumela ukuba ube nokuhlala okumnandi, ixesha elifanelekileyo lokucwangcisa uhambo lwangomso edolophini kunye. Ikhitshi elifakwe kakuhle ligcwele zonke izixhobo ozidingayo ukwenza into emnandi.
Amagumbi amahle okulala abonakaliswe ngesitayile kwaye abonisa isilingi yeplanga kunye nomgangatho wokukhuthaza ubuthongo obumnandi kwaye kukho indawo yokugcina impahla yakho kunye nethafa entle eyi-50m2 ejonge iintaba zaseLebhanon.
Le ndlu ikwanegumbi lokuhlambela eli-2 labucala elifakwe isinki, ishawa, indlu yangasese kunye ne-WC yeendwendwe ezi-1.
4.73 · Izimvo eziyi-103
Indawo entle kakhulu kwaye enoxolo, indawo yokuhlala inombono omangalisayo wentaba, egqunywe likhephu ebusika.
Iindwendwe zinokuzuza echibini ehlotyeni, kukuhamba imizuzu emi-2 ukusuka kwigumbi lokuhlala.
Uya kufumana ukufikelela kuyo yonke indlu. Zive usekhaya!
Ukuzijonga ngokwakho nge-Master lock, ikhowudi iya kubonelelwa ngosuku olu-1 phambi komhla wokubhukisha. Ndiza kuqinisekisa ukuba ufika ukhuselekile kuloo flethi kwaye uphendule nawuphi na umbuzo obuziweyo, zive ukhululekile ukuqhagamshelana nam kwa-Airbnb ukuba ufuna naluphi na uncedo okanye iingcebiso! Ndiyavuya ukukunceda!
Ngexesha lokuhamba: qinisekisa ukuba indawo yokuhlala icocekile, izitya zenziwe, inkunkuma ifakwe kwi-oven, i-hob kunye nefriji / ifriji zicocekile. Onke amaqhosha kufuneka abuyiselwe kwibhokisi yokutshixa xa uhamba. Ukungaphumeleli ukwenza oko kuya kubangela intlawulo yokutshintsha. Iindwendwe kufuneka zikhawuleze zazise umphathi wazo zonke iziphene kwigumbi kunye nomonakalo owenzeka kwigumbi.
Ukuzijonga ngokwakho nge-Master lock, ikhowudi iya kubonelelwa ngosuku olu-1 phambi komhla wokubhukisha. Ndiza…